Ny mampiavaka ny gorodona hazo tena izy
Ny gorodona hazo tena izy dia ny fanodinana aorian'ny fanapahana azy mivantana amin'ny hazo voajanahary ary nanjary, nitazona ny lamina haingon-trano miaraka amin'ny hazo solid sy voajanahary tsara tarehy tanteraka, satria tsy nampiasa solika adhesive hampitahana ny fiarovana ny tontolo iainana amin'ny ankapobeny. Ny gorodona hazo tena izy dia mila mametraka ...
amin'ny alàlan'ny admin amin'ny 20-12-28
Ireo toetran'ny SPC voarindra tsara — indrindra ny toetrany tsy misy rano — dia teboka fivarotana lehibe ho an'ny RSA. Aseho ny Pro12 an'ny Axiscor. Ny fizarana LVT, ny fitomboan'ny mpikatroka mavesatra, dia nahita fiovana lehibe nitranga tamin'ny 2019. Avy amin'ny fihenan'ny ...
Vaovao momba ny gorodona
Ao anatin'ny sokajy LVT, SPC sy WPC dia manohy mitondra varotra. Ny sary dia Distinction Plus avy amin'ny fanangonana Shaw Floors 'Floorté. Ny sokajy gorodona mateza mateza dia nanohy ny fiakaran'ny toetr'andro tamin'ny taona 2019, ary tsy misy na aiza na aiza ...
Adiresy: TSIA. 169 Hanzhong Road, Distrikan'i Qinhuai, Nanjing City, faritanin'i Jiangsu, Sina